Toothpaste Industry CMC no ampiasaina ho thickening additive in toothpaste hisorohana ny mafy-ranon-javatra ny fisarahana ny toothpaste, izay mahatonga ny toothpaste manana viscosity sasany sy ny tsy fiovaovana sy ny feta dia malefaka sy tsara, ary Manatsara ny fanandramana toothpaste. In toothpaste, isan-karazany tsira SIMIKA dia matetika koa, ary ny sira fandeferana ny CMC amim-pahombiazana dia afaka manakana ny electrolyte tsy manimba ny feta viscosity, hatsora sy mafy orina-rano fisarahana. CMC manana ny tsara pseudop ...
CMC no ampiasaina ho thickening additive in toothpaste hisorohana ny mafy-ranon-javatra ny fisarahana ny toothpaste, izay mahatonga ny toothpaste manana viscosity sasany sy ny tsy fiovaovana sy ny feta dia malefaka sy tsara, ary Manatsara ny fanandramana toothpaste.
In toothpaste, isan-karazany tsira SIMIKA dia matetika koa, ary ny sira fandeferana ny CMC amim-pahombiazana dia afaka manakana ny electrolyte tsy manimba ny feta viscosity, hatsora sy mafy orina-rano fisarahana.
CMC manana ny tsara pseudoplastic izay mahasoa mba hanatsarana ny famokarana fahombiazana ny toothpaste. Izany dia mety kokoa ny manenjika avy rehefa mampiasa.
Ny karazana toothpaste orinasa: TM9, TH9, TH10 sy TVH9
Next: orinasa mpitrandraka